beta 2 tvOS 12.1.2 watchOS 5.1.2 yevanogadzira | Ndinobva mac
Nezuro masikati pamwe chete neiyo beta 2 vhezheni ye macOS 10.14.2 Apple yakaburitsa yechipiri beta vhezheni ye iOS, watchOS 5.1.2 uye tvOS 12.1.2. Idzi shanduro dze beta dzinonyanya kutarisana nekuvandudzika mukugadzikana uye kuchengetedzeka kwemaitiro.
Munyaya ye WatchOS 5.1.2 Ivo vanowedzera izvo zvakawanikwa mune yapfuura beta vhezheni uye izvo zvine hukama ne "zvinetswa" izvo zvinobvumidza vashandisi kuwedzera mapfupi kune zvinoshandiswa mune itsva Apple Watch Series 4 dials, isu tinofungidzirawo kuti ivo vanowedzera zvigadziriso kuti vasadaro Dambudziko rakafanana rinoitika neyekuvandudzwa kwekare iyo yakasiya mamwe mamodheru ine yakatarwa apple logo pasina mukana wekumisa.
Iwo mabetas anoshanda chaizvo kudzivirira aya matambudziko uye kunyangwe chiri chokwadi kuti iyo beta shanduro dzeApple Watch hadzisi mune yeruzhinji beta chirongwa . isingashandisike kusvika pakufanira kukumbira chinotsiviwa ...
Asi isu takatotaura nezvedambudziko iro uye Apple yakatotanga iyo yazvino vhezheni 5.1.1 ine gadziriso kuchinetso, saka ngatitarisei pane zviripo. Aya beta 2 shanduro dzeOS dzakasiyana dzinounza nhau diki, asi isu tinogara tichidaro zvakakosha kugadzirisa mabasa emukati eOS uye kugadzirisa maduku maduku akaonekwa mukati mawo, saka vese vanogadzira vanga vatove neshanduro nyowani kwemaawa mashoma, vachiona iwo matsva ekuita maficha akawedzerwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Beta 2 ye tvOS 12.1.2 uye watchOS 5.1.2 zvakare iri mumaoko evanogadzira
IconKit: iyo application iyo inogadzira otomatiki mifananidzo yezvishandiso zvako pamutengo unodhura
Safari Technology Preview inosvika vhezheni 69